N+ 200911 ကား သာမိုစတက် မဖြုတ်ကြနဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » N+ 200911 ကား သာမိုစတက် မဖြုတ်ကြနဲ့
N+ 200911 ကား သာမိုစတက် မဖြုတ်ကြနဲ့
Posted by nature on Sep 20, 2011 in Creative Writing | 23 comments
အရင်က မြန်မာပြည်မှာ ကားတွေ ရောက်လာရင် ရောက်ရောက်ခြင်း ကားမှ သာမိုစတက်ကို ဖြုတ်ကြပါတယ်။ သာမိုစတက်ဟာအင်ဂျင်ကိုအေးအောင်လုပ်တဲ့ （Cooling System) ရေလိုင်းကို ပိတ်ထားတာကို တွေ့ရတာကြောင့်ပါ လို့ပြောပါတယ်။ သာမိုစတက် ကို မဖြုတ်ကြဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ယူကြပါ။ မကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ကြပါ။ ကန့်ကွက်စရာမရှိပါ။
ကားမှသာမိုစတက်ဟာ ရေလိုင်းကို ပိတ်ထားတာကြောင့် အင်ဂျင်စမောင်းမောင်းခြင်းအင်ဂျင် အပူချိန် ကို အလျှင်အမြန်တက်စေပါတယ်။ အင်ဂျင်အပူချိန်တက်လာရင် ရေလိုင်းကို ပိတ်ထားတဲ့ သာမိုစတက်ဟာ ဟ သွားပြီး အင်ဂျင်ရဲ့ အအေးပေးစံနစ်ကို စတင် လည်ပတ်စေပါတယ်။ အအေးပေးစံနစ် ရေရဲ့ လည်ပတ်မှုကို အပူချိန် ၊ သာမိုစတက်နဲ့ ထိမ်းညှိ ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သာမိုစတက်ဟာ အင်ဂျင်ရဲ့အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းမဲ့ အပူချိန်ကို အလျှင်အမြန်ရောက်ရှိအောင် အလိုအလျှောက်ထိန်းညှိ ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ သာမိုစတက်ဟာ အင်ဂျင်ရဲ့သက်တမ်းကိုလည်း ရှည်စေပါတယ်။ ကားထဲထည့်မည့်ရေကို ရေသန့်သာ ထည့်သင့်ပါတယ်။ coolant ကို လည်းထည့်ရပါမယ်။
သာမိုစတက် ရှိတဲ့ကားဟာ စ မောင်းမောင်းခြင်း အပူချိန် တ၀က်နီးနီးကို အလျှင်အမြန်တက်ပြီး တ၀က်ပတ်ဝန်းကျင် ကနေ ဆက်မတက်ပဲ ရပ်နေတတ်ပါတယ်။
တခါတလေ ကားဟောင်းတွေ ကားအင်ဂျင်စစခြင်းနှိုးမရလို့ ပူအောင် မီးရှို့တာတွေကို တွေ့ဘူးမယ်ထင်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ဟာ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ အလုပ်လုပ်တာဖြစ်လို့ အပူချိန်မြင့်ပါတယ်။
ကားရဲ့သက်တမ်းရှည်စေဖို့ကတော် ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ အတွင်း ၁ကြိမ် အင်ဂျင်ဝိုင်လဲပြီး ဆီစစ် အင်ဂျင်ဝိုင်စစ်တွေလဲပြီး အမဲဆီထိုး ၊ air cleaner မှဖုန်များ ကို လေနဲ့မှုတ်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရင်ကောင်းပါတယ်။
ဘက်ထရီ အက်ဆစ်လျှော့ရင်လည်း ရေသန့်ကိုသာထည့်ပါ။ ရေသန့်ထည့်တဲ့အခါ High Level အထိထည့်ပါ။ ထည့်ထားပြီး စက်ခဏနှိုးပြီး charging သွင်းပါ။(အက်ဆစ်ဖြည့်တဲ့ အပေါက် အတွင်း က ကော်ငုတ်ထိရုံဖြည့်ပါ။)
ဘီးလေထိုးရင်လဲ ဘီးမှာပေးထားတဲ့ လေပေါင် စံနှုန်းအတိုင်းထိုးပါ။ ကားဘီး တဘီးနဲ့တဘီး ပေးထားတဲ့ လေပေါင် စံနှုန်း ကွာတတ်ပါတယ်။ ကုန်ကားတွေဆိုရင်တော့ ပေးထားတဲ့လေပေါင်ထက် ပိုထိုး ရပါတယ်။ ကုန်ကားတွေ လေပေါင်လျှော့ ရင် တာယာအသစ်တွေလည်း ပွင့်တတ်ပါတယ်။ စတီးတာယာတွေလည်း လေပေါင် တင်းအောင်ထိုးပါ။ လေပေါင်လျှော့ရင် လမ်းကြမ်းတဲ့ အခါတာယာ ခဏလေးလိမ်သွားတတ်ပါတယ်။ စတီး တာယာသုံးခြင်းဟာ ကားအောက်ပိုင်းတွေကို သက်သာစေပါတယ်။
အင်ဂျင်ဝိုင် ကုမ်ပဏီ ကို ရောက်တော့
မော်လီကျူး ဆိုတာ အသစ်ဝင်သတဲ့
တင့်ကားတွေ မှာ သုံးတာ ဆိုကလား
ကားတို့ ဆိုင်ကယ် တို့ မှ သုံးရင်
အင်ဂျင်ပါဝါ ပို မြင့်စေတယ် တဲ့ ဗျ
အင်ဂျက် သက်တမ်းကို လည်း တိုးစေတယ် တဲ့..။
ဈေးကတော့ သာမန် အင်ဂျင်ဝိုင်ထက် ၅ ထောင် ကျပ် ခန့် ပို ပေးရတယ် ဗျ
ဟောဗျာ… ဒီလိုမျိုးကြီးလား…. ကျနော့်ကားလေး ဝယ်စတုန်းက သာမိုစတက်ဖြုတ်ရမယ်လို့
ကားဝပ်ရှော့ဆရာတွေက ပြောလို့ ဗျ… heat တက်မှာတဲ့…
ဒါဆို သူတို့တွေ ပြောနေတာတွေ ဟာ မှားနေတယ်ပေါ့နော်….။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ ကားသာမိုစတက်ဟာ လိုအပ်လို့ နိုင်ငံခြားက ကထုတ်လုပ်တဲ့ပညာရှင်တွေက တွက်ချက်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပြီးမှ ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီမှာ က ဒီလို ပညာရှင်တွေနည်းပါးပြီး မျက်မြင်နဲ့ စိတ်ကူးတည့်ရာလုပ်နေတာလို့ထင်ပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့်တော့.. ကားအင်ဂျင်တခုမှာ… မလိုပဲတပ်ထားတဲ့အပိုပစ္စည်းမရှိပါဘူး..။
အင်ဂျင်နီယာတွေက.. ပေးထားတဲ့ဘက်ဂျက်ထဲ.. ကားတန်ဖိုးကြည့်ထီထွင်ရတာမို့.. အပိုမတပ်ပါဘူး..။
မြန်မာပြည်မှာက.. ရာသီဥတုပူပြီး ..အင်ဂျင်ကို မတရားခိုင်းကြတာမို့.. အင်ဂျင်အပူချိန်အမြဲမြင့်နေတတ်တာပါ..။ အဲဒီတော့ အပူချိန်ထိမ်းချုပ်ပိတ်ဆို့တဲ့.. သာမိုစတက်အသုံးမ၀င်ဘူးထင်ပြီး စက်ဆရာတွေလက်စွမ်းပြတာပါပဲ..။
အင်ဂျင်တွင်းဖိအားအပြောင်းအလဲတွေနဲ့.. ဆီပေါက်ကွဲမှုတွေအပေါ်.. ညှိဖို့လည်း သာမိုစတက် တပ်ထားတာပါနော..။
သူကြီးထောက်ခံတော့ အားရှိသွားပြီ။ အများနဲ့တယောက်မို့ ဒီ post ရေးသာရေးရတာ ခပ်လန့်လန့်မို့ စကားကြိုခံထားရတယ်။ သာမိုစတက်ဖြုတ်ထားရင် ဆီပိုစားတယ်ဆိုတာ ထောက်ခံပါတယ် သူကြီးရေ။
မြန်မာပြည်မှာ.. ညာမောင်းကားတွေ… လက်ျာကပ်မောင်းလမ်း…မောင်းနေတာ..တနှစ်ကို လူတွေအသက်ဘယ်လောက်ချွေယူနေတယ်ဆိုတာနဲ့..
ကားထုတ်လုပ်သူခွင့်ပြုတာထက်.. အဆမတန်ဝန်တင်တဲ့..ကုန်ကားကြီးတွေကြောင့်. … နိုင်ငံပိုင်လမ်း-တံတားတွေပျက်တဲ့အကြောင်း..ချေ၇းကြည့်ပါလား..။
လေး(leaf springs)တွေမတရားပိုးပြီး… အင်ဂျင်နီယာရင်းဘာမှနားမလည်တဲ့.. သူတွေ.. “စံနစ်တကျနဲ့..ေ–ာက်တလွဲတွေ… လုပ်နေကြ”တဲ့အကြောင်း…..
Mechanic တစ်ယောက် ပြောဘူးတာ တော့ Japan လိုနိုင်ငံ မျိုးမှာ ရာသီ ဥတု အေးလွန်း လို့ Thermostat တပ်ထားတာတဲ့ ။ ရေလည်အုံ ထဲ က သာမို စတပ် ဖြုတ်လိုက်ရင် ၊ အိတ်ဇော ထဲက မီးခံ ကျောက် ဖြုတ်လိုက်ရင် ကား အင်ဂျင် နဲနဲ အေး ပြီး မောင်း လို့ပိုကောင်းတာ ၊ ဆီ နဲနဲ ပိုစားတာတော့ အမှန် ပါဘဲ ။ မြန်မာ့ နည်း မြန်မာ့ ဟန် ပေါ့ဗျာ ။ :D အဲ ကြာကြာ ခံ မခံတော့ Mechanic လဲ အာမ မခံပါ :D
ဟေးးးးးးးးးး … ကားပစ္စည်းအကြောင်းလေး တင်တော့ ဗဟုသုတရပါတယ် … ။ ကားတွေလည်းတောက်လျှောက်ပေါတော့မယ် …ကားတွေ ဒေါ်လာ 3500 နဲ့ အထက် ၀ယ်လို့ရတော့မယ်ဆိုလို့ တော့ … ကားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ ရှိလာသင့်တာ အမှန်ပါပဲ … ။
suzuki R+ မှာလည်း သာမိုစတက် ပါတယ်ဗျ။ သူက အပူချိန်တက်လာမှ ပန်ကာကိုလည်စေတယ်လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော် မန္တလေးကိုသွားတုန်းက ရေဆူလာလို့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ပြကြည့်တော့ သာမိုစတက်ဖြုတ်ထားလိုက်ရင် ပန်ကာက တောက်လျှောက် လည်လိမ့်မယ်တဲ့၊ အဲဒီတော့မှ ရေမဆူတော့ဘူးတဲ့။ ဟုတ်တယ်ဗျ သာမိုစတက်ဖြုတ်ထားလိုက်တော့ ပန်ကာ တောက်လျှောက်လည်ပြီး Heat ကျစေတာပေါ့ဗျာ။ ဆီတော့ အတော်စားတယ်နော်။ သိသိသာသာကြီးကိုစားပါတယ်။
ကား နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မောင်းတတ်တာက လွဲရင် ဘာမှ မသိဘူး။ ပျက်ရင်တော့ ၀ပ်ရှော့ဆရာ ပြောတာပဲ နားထောင်ရတော့တာပဲ.. ဗဟုသုတတခုတော့ တိုးတာပေါ့.. ဒါနဲ့ သာမိုစတက် ဆိုတာ ဘယ်နားက ဘယ်လို ပစ္စည်းမျိုးလေးလဲ.. ပုံလေး ပြထားပါလားဟင်..
အခု ကားဈေးတွေ တော်တော် ကျနေပြီတဲ့ ဘယ်လောက် ကျပြီလဲ မသိဘူး။
ကားပြခန်းတွေ များများ လာဖွင့်ရင်တော့ ကားဈေးတွေ တည်ငြိမ်ပြီး ကားကောင်းကောင်း စိတ်ချမ်းသာသာနဲ့ စီးရမလားပဲ.. ချယ်ရီ တွေ နောက်ဆို ၄၀ တဲ့.. အခုက စပြီး အသစ်စက်စက် စီးရဖို့ ပိုက်ဆံ စုနေပြီ.. ပိုက်ဆံ ပြည့်မှာနဲ့ ဈေးကျမှာနဲ့ မကြာခင် လာမည် ကိုယ်ပိုင်ကား မောင်းမယ်….. မျှော်……
ကြည့်ရတာ.. ဆူးမမတို့.. ကိုယ်တိုင်ဖြုတ်-တပ်ဖို့အကြံထုတ်ပြီနဲ့.. တူတယ်..။
အင်ဂျင်နဲ့.. ရေဒီရိတ်တာ.. ဆက်တဲ့..အပေါ်ပိုက်ထဲမှာရှိတတ်ပါတယ်..။
အာ… အစ်မဆူး ကတော့ လုပ်ပြီ ..အစ်မ အခုစီးနေတဲ့ ကားတောင် အတော်ကောင်းနေတာ …ကားဈေးကျလျှင် ကားမစီးနဲ့ ဒုံးပျံသာ ၀ယ်စီးတော့ အဟီး
ဒီကလေးကတော့ မသင်ရဘူး တော်တော် တတ်ပါလား.. ပိုက်ဆံပြည့်ရင် ကားအသစ်ကြီးနဲ့ မြို့တပတ်ပတ်ပြီး မုန့်အ၀ လိုက်ကျွှေးမလို့ အစီအစဉ်ပြောင်းသွားပြီ။ အခုတော့ ဒုံးပျံဝယ် ခိုင်းလို့.. နောက်နေ့မှ ဒုံးပျံ ၀မ်းနှုတ်ဆေး တထုတ်ဝယ်ပြီး အိမ်ပို့ပေးမယ်။
အခု..တိုရိုတာကရိုးလား.. ၉၇မိုဒယ်လောက်ဆို.. ဘယ်လောက်တန်ဖိုးပေါက်နေသလဲ. သိချင်ပါတယ်..။
သူကြီးရေ၊ ကျွန်တော်လည်း ကားဈေး မသိဘူး။ သိတဲ့သူများတင်ပေးပါလား။ သူကြီးက သူ့ကားကို မြန်မာပြည်ပို့ရောင်းတော့မယ်ထင်တယ်။
အသိတယောက်စီက ကြားတာတော့ အရင် ၁၄၀၀ လောက် အထိ တက်သွားတဲ့ ရွှေငါး အခု ၅၀၀ ပဲ ရှိတော့တယ်တဲ့.. သူလည်း ကြောက်တာနဲ့ ရောင်းလိုက်တယ်တဲ့.. သတင်းကတော့ ဖျား လောက်တယ်။ သေပြီပဲ။
သိန်းသောင်းကျော် အသာလေးတန်ပါတယ်။ ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ပစ္စည်းအသယ်အပို့ လုပ်တဲ့ကားမိုလို့ပါ..။
အရင်တုန်းက နဲ့ နယ်မှာ အမျာ.းစုက ဖြုတ်မောင်း ပေမဲ့ ခု နောက်ပိုင်း မဖြုတ်ကြတော့ပါဘူး ။
Blackchaw ပြောတဲ့ Thermostat ဖြုတ်လိုက်ရင် အမှန်က ပန်ကာ မ လည်ရမှာ။ ပန်ကာ တောက်လျောက်လည်တာက သူ Wiring ပြင်လွှတ်လိုက်တာ နေမှာ။
Thermostat ဖြုတ်လိုက်ရင် ရေ က အတားအဆီး မရှိ အပြည့်လည်ပြီး Heat ကျတာပါ။ ပန်ကာ ကို Heat sensor ကျော်ပြီး ဆက်ပေးလိုက်လို့ ပန်ကာတောက်လျောက်လည်ပြီး heat ပိုကျစေ တာပါ။
ဒီ Thermostat က အပူချိန်ပေါ် မူတည်ပြီး ရေလည်ပါတ်မူထိန်းပေးတာပါ။
အင်ဂျင်နီယာက သူနိင်ငံ အပူချိန်နဲ့ တွက်ထုပ်ပေးသလားလို့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ အပူချိန်နဲ့ဆို ရပါ့မလား … ကားလေးတော့ မသိဘူး ကားအကြီးတွေတော့ ဖြုတ်ထားကြတယ် အဝေးပြေးကားတွေမှာ.. ဒါတောင် ရောက်တဲ့နေရာဆိုရင် အဖုံးတွေဖွင့် ရေလောင်းနဲ့ အလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပဲ.. ကြုံတုန်းလေး ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ အိမ်က ကျွဲလဲ နေပူရင် ခိုင်းလို့ မရဘူး မြန်မာ စံတော်ချိန် ၁၀ နာရီ လောက်ဆို ရေလောင်းပေးရတယ် မလုပ်ပေးလို့ကတော့ လူရော လှည်းရော ရေကန်ထဲ ရောက်ပြီသာမှတ်…..:P
ကျွန်တော်လည်းဒါကို စဉ်းစားဖူးပါတယ်။ ရာသီဥတုပူတာကတော့ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ အပူချိန်နဲ့ အပြင်က နေပူတဲ့ အပူချိန်နဲ့ ဘယ်လိုမှ နှိုင်းယှဉ်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွဲဆိုတာ သက်ရှိသတ္တ၀ါဖြစ်လို့ နေရဲ့ အပူချိန်ဟာ အများကြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ်ထင်ပါတယ်။
ကား ကြီးတော့မသိပါ။ ကားလေးတော. ကိုယ်တွေ.ပါ ။ ရ ပါတယ် ။ Heat က တ၀က်အပြင်ပိုမတက်ပါ။ Aircond ပါ သုံးချင်ယင်တော့ petrol ကားဆို Octane 90 သုံးယင်ပိုကောင်းပါတယ်။
ုhtoosan ရေ ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ပန်ကာတောက်လျှောက်လည်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ heat မတက်အောင်ပေါ့။